Kutheni le nto iBrazil ibaluleke kangaka kwiimarike? | Ezezimali
Kutheni le nto iBrazil ibaluleke kangaka kwiimarike?
Ngeli xesha enye yeendawo ekugxilwe kuzo kwiimarike zezemali yiBrazil ngenxa yonyulo lukamongameli olubanjwe kuqoqosho lokuqala lweLatin America. Ukubaluleka kweli lizwe likhulu kungenxa yobunzima enalo njengenye yeemarike eziphambili ezisakhulayo kwihlabathi kwaye elinakho ungcolisa olunye uqoqosho yokufaneleka ngokukodwa, njengakwimeko ethile yeArgentina. Esi sesinye sezizathu zokuba amehlo abatyali mali abe kweli lizwe elinabemi abangaphezu kwezigidi ezili-180.000.
Unyulo luvelise ukuba umgqatswa wobuzwe ubuye nembuyekezo enkulu kunembangi yakhe yezopolitiko. Kuba, ngenene, umnqweno ongasekunene, Jair Bolsonaro, yongeze i-46,03% yeevoti ezisemthethweni kunyulo olubanjwe ngeCawa, olumbeka kwindawo ethandwayo kumjikelo wesibini wonyulo oza kubanjwa nge-28 ka-Okthobha. Ngokuchasene nommeli wasekhohlo uFernando Haddad, owayesakuba ngusodolophu waseSao Paulo kunye nomgqatswa weqela lasekhohlo labasebenzi (PT), ekhokelwa nguLula da Silva, ofumene ngaphezulu nje kwe-28%.
Impendulo yeemarike izaphulelo koyiso lwepiko lasekunene ukusukela oko ukuvota kwandisa umahluko kwinjongo, imarike yemasheya yaseBrazil inyuke, nditsho ukunyuka kwe-3% kwiintsuku ezingaphambi kokuphuhliswa kolu nyulo lukamongameli lubalulekileyo. Oku ngokwenza kuthetha ukuba imarike yesitokhwe yaseBrazil ibheja kulonyulo lukaJair Bolsonaro ngokuqikelela ukuba kunokwenzeka ngakumbi ukukhuthaza amanyathelo alindelwe ngabameli bezemali belizwe laseRio de Janeiro. Ejongene noloyiko oluthile lwezicwangciso zezoqoqosho oluye lwachasana nembangi kulonyulo.
1 IBrazil: ukunyuka okunyuka kwimarike yemasheya
2 Ubukho beenkampani zaseSpain
3 Ubunzima obuthile boqoqosho lwaseBrazil
4 Ukuvela kwamazwe aphesheya
5 Ngena kwiingxowa mali
6 Winks kwisikhundla sikaBolsonaro
IBrazil: ukunyuka okunyuka kwimarike yemasheya
Esona salathisi sibalulekileyo sibingelele uloyiso kwezopolitiko ezisekunene ngokunyuka okukhulu. Ngale ndlela, emva kokuphumelela kukaJair Bolsonaro kumjikelo wokuqala wonyulo ngeCawa, iSão Paulo Stock Exchange ivule ngalo Mvulo ngokunyuka ngamandla kwe-6%: kwimizuzu engama-20 yokuqala yokusebenza, Isalathiso seBvespa yabekwa kwindawo engama-87.262 amanqaku. Enye yezona indices zintle kakhulu kwihlabathi kwaye ngokuchaseneyo notshintshiselwano lwesitokhwe kwilizwekazi elidala ebeliqhutywa yimeko yokuthengisa esindwa ngamanyathelo ezoqoqosho athathwe e-Itali.
Isalathiso saseBrazil yiBvespa kwaye sesinye sezona zibaluleke kakhulu kwaye senziwe ziinkampani ezingama-50 ezidweliswe kwindawo ebalulekileyo eSao Paulo Stock Exchange. Ngayiphi na imeko, esi salathisi senziwe ngezihloko zeenkampani ezimele I-80% yexabiso elithengisiweyo kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo. Iphononongwa rhoqo ngekota, ukugcina inqanaba lokumelwa kwazo zonke izabelo ezithengiswa kwintengiso. Ukuya kwinqanaba lokuba yenye yeendawo ekubhekiswa kuzo kubatyali mali abancinci nabaphakathi kule ndawo inkulu yejografi kwelinye icala leAtlantic.
Ubukho beenkampani zaseSpain
Esinye sezizathu zokulandela ukuthengiswa kwemasheya eRio de Janeiro kwezi ntsuku kungenxa yokumiliselwa okuqinileyo kweenkampani zaseSpain kweli lizwe. Ewe kunjalo, ayinakulityalwa ukuba ezinye zeenkampani ezinkulu, ezinje, umzekelo, I-BBVA, iSantander okanye iTelefonicaBaye basebenza iminyaka eliqela. Akumangalisi ke ngoko ukuba abatyali mali bajonge kakhulu i-Bovespa kunye nayo yonke into eyenzekayo kolu lonyulo luthathe inxaxheba eArgentina. Ayothusi into yokuba kuninzi okusemngciphekweni kwezi ntsuku.
Ewe akukho nto ingaphantsi kwenani elipheleleyo Iinkampani ezingama-22 zentengiso ekhethiweyo yaseSpain Zimelwe eBrazil, ngengeniso eqikelelweyo engaphezulu kwe-20.000 yezigidi zeerandi. Phakathi kwabo kukho iBanco Santander, iTelefonica, Iberdrola, Repsol, Endesa, ACS, Ferrovial, Acciona, Mapfre, Amadeus, Dia, Inditex, Indra, Meliá, Naturgy, Técnicas Reunidas, IAG, Viscofan, Nokia Gamesa, Enagas, Cie Automotive and Grifols. Oko kukuthi, ezinye zezinto ezinzima ze-Ibex 35 kwaye nakweyiphi na imeko, uninzi lweenkampani ezibaluleke kakhulu elizweni. ke, kungaphezulu kwesizathu esaneleyo sokujonga iBrazil kwezi ntsuku.
Ubunzima obuthile boqoqosho lwaseBrazil
IBrazil, uqoqosho olukhulu kwiLatin America (kunye ne-40% ye-GDP) kunye nabona bantu baninzi (i-192 yezigidi zabemi) iyaqhubeka nokuvela ngokuqinisekileyo, ngaphandle kwengxaki yezoqoqosho esele ikho kwimveliso yayo. Ke ngoko, ii-equities zaseBrazil zibonise a intsingiselo ngokucacileyo ye-bearish kule minyaka yangoku. Ngaphakathi kuncipha kakhulu kufutshane ne-20%. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba inxenye elungileyo yeearhente zezemali ibadimazisile abathengi babo ekwenzeni utyalomali lwabo kweli lizwe.
Ngoku emva konyulo, kuya kuhlala kubonakala ukuba iyintoni na ikhosi eza kuthathwa ngamashishini carioca okanye ukuba yonke into izakuqhubeka ukuza kuthi ga ngoku. Ngayiphi na imeko, kuyakufuneka ukuba ube nolwazi kakhulu ngesicwangciso soqoqosho esiza kungeniswa ngumongameli omtsha welizwe. Iya kuba ngumqondiso ojolise ngqo kwicala oya kuthathwa yimarike yemasheya ukusukela ngoku. Ukufumanisa ukuba lixesha lokungena kwintengiso yesitokhwe okanye ngokuchaseneyo, kuya kufuneka uhlale njengangaphambili. Oko kukuthi, kwizikhundla zokuhlawula amatyala ukunciphisa umngcipheko ongeyomfuneko kutyalo-mali.
Ukuvela kwamazwe aphesheya
IBrazil ngomnye wabameli abakhulu boqoqosho olusakhulayo kwihlabathi liphela nakwimali yalo, eyinyani, ilandelwa imihla ngemihla ngabarhwebi bamanye amazwe ngenxa yokungazinzi okungaqhelekanga. Ngomnqamlezo obonisa umahluko omkhulu kakhulu phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona isezantsi. Apho unokufumana khona imali eninzi, kodwa ngenxa yesizathu esifanayo ingozi iphezulu kakhulu ukuba ungaphulukana nemali eninzi oyityalileyo. Ingakumbi kutshintsho olwenziwe yonke imihla ngemali yesalathiso, eyidola yaseMelika.
Nangona kunjalo, enye yeenzuzo ezinkulu zesalathiso sesitokhwe saseBrazil, iBovespa, kukuba inezinto ezininzi Ukuqhubela phambili xa imeko itshintsha. Amathuba ayo makhulu kuba inokuphinda ibenenani elingaphezulu kwezinye ii-indices zamazwe aphesheya, kubandakanya neSpanish. Kungaphezulu kwesizathu esaneleyo sokuxabisa ukungena kwezikhundla kule marike ibalulekileyo yezemali ukusukela kula maxesha achanekileyo. Nangona kuvavanywa umngcipheko wolu hlobo lomsebenzi.
Ngena kwiingxowa mali
Ngayiphi na imeko, isicwangciso-qhinga sokukhusela umdla wotyalo-mali oluncinci noluphakathi sisekwe kwikhontrakthi yotyalo mali. kwizabelo ezisekwe Kwesi sikwere samazwe ngamazwe. Zininzi iimali ezikhoyo kweli lizwe laseMelika kwaye ngale ndlela unokukhetha phakathi kweendlela ezahlukeneyo zokulawula imali yakho. Kuba awungekhe ulibale ngeli xesha ukuba olu didi lweemveliso zemali zidibanisa iiasethi ezininzi zemali ukukhusela imali yabathathi-nxaxheba. Oko kukuthi, awuzivezi ngqo kwimakethi yesitokhwe yaseBrazil njengoko unokwenza ngokuthenga kunye nokuthengisa izabelo kwimarike yemasheya.
Ngale ndlela, ungadibanisa utyalo-mali lwakho kwii-equities zaseBrazil kunye nezinye iimarike zesitokhwe, kokubini kwindawo yaseMelika nakwilizwekazi lakudala. Yile nto ayibiza ngotyalo-mali olwahlulayo endaweni yokugcina yonke imali oyigcinileyo kwingobozi enye yotyalo-mali. Ukongeza, inenzuzo yokuba awuzukuyila iqhinga lotyalo-mali. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, umphathi onamava abanzi kolu hlobo lokusebenza kwiimarike zezabelo ziya kugunyaziswa. Ngaphandle kwezinye izinto zobugcisa eziqwalaselweyo kwaye kude kube kwinqanaba lokujonga.
Winks kwisikhundla sikaBolsonaro
Ukuze uyazi indlela yokuhambisa iintshukumo zakho ukusukela ngoku, awuzukukhetha ngaphandle kokuba ube nezitshixo eziziswa yimarike yezemali yaseBrazil. Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kukuba udidi lweshishini lwaseBrazil kunye nezoqoqosho ezikhulileyo ziyakhuthaza ngokuzolileyo umgqatswa kamongameli wase-Jair Bolsonaro ukuba aphumelele isigxina kunyulo lukamongameli eBrazil. Ayothusi into yokuba olunye loloyiko olukhulu kula macandelo abalulekileyo kukuba washiya urhulumente kuye kuqoqosho olukhulu eLatin America.
Le nto isebenza ngokuthanda kwamashishini alinganayo kweli lizwe ukuba anyuke kakhulu kwiiveki ezizayo kwaye mhlawumbi nakwiinyanga. Yinto onokuthi uyisebenzise ukuze wonge imali ngendlela eyonelisa kakhulu umdla wakho. Nangona uthintela umngcipheko ekusebenzeni kwemali engekho ngaphezulu. Kufuneka utyale imali ukuya kuthi ga kwi-20% yenkunzi iyafumaneka ukwenza utyalomali lwezi mpawu. Kwelinye icala, kungacetyiswa kakhulu ukuba ubeke i-odolo yomda welahleko ukukhusela izikhundla zakho kolu tshintshiselwano lukhethekileyo nangokuchasene nezinto ezinokwenzeka kwiiveki ezizayo.
Elinye inyathelo onokuthi ulisebenzise kukukhetha iinkampani ezibonelela ngokhuseleko ngakumbi kwimigca yeshishini labo. Ungaze ubhenele kwiimodeli ezinoburharha ezinokuthi zenze ukwehla okukhulu kumaxabiso abo. Njengoko unokwenza kwimarike zelizwe. Ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lokwahluka ngokubhekisele kule nto ibalulekileyo kwicandelo lotyalo-mali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Kutheni le nto iBrazil ibaluleke kangaka kwiimarike?
Zithini iimveliso ezivumela utyalo-mali olwahlulayo?
Ukuqesha imali mboleko sele kubiza kakhulu: inzala iyenyuka